China 4000kgs Mini Crawler Excavator ifektri nabahlinzeki |LAYISHA
3-Okufanele kakhulu ukuthukululwa kwenhlabathi yegreenhouse yemifino, ukutshala kwekhampasi kweminyango kamasipala, ukumba umgodi wesihlahla, ukutshala izindawo zokutshala izithelo, ukugaywa komgwaqo ogandaywayo, ukuxuba impahla yesihlabathi negravel, ukwakhiwa kokusebenzela endaweni ewumngcingo nokunye.
4-Ongakukhetha: Injini ye-Yanmar 3TNV88, i-hydraulic hitch esheshayo, isando, isibali, i-auger, isithupha, amabhakede osayizi abahlukene.
Ukuthengiswa kwezimbiwa kuyinkomba ebalulekile yobungqabavu bomnotho njengoba isidingo ngokuvamile sisekelwa ukukhula kwezimayini nokuthuthukiswa kwengqalasizinda.
Ngakho-ke eminyakeni yakamuva, inkampani ye-FORLOAD itshale imali yocwaningo lwe-excavator kanye nokusungula isinyathelo ngesinyathelo.Isabelo se-FORLOAD brand mini crawler excavator emakethe siyaqhubeka nokukhula unyaka nonyaka.
Manje i-FORLOAD excavator ihlanganisa i-excavator encane, i-excavator ephakathi kanye nochungechunge lwe-excavator enkulu, umthamo osuka ku-800kgs kuya ku-36000kgs futhi ohlanganisa uhlobo lwe-zero lomsila kanye nohlobo oluvamile.
Imakethe yase-Europe kanye nesicelo semakethe yaseNyakatho Melika siqinile kakhulu ekukhiqizweni, futhi kucutshungulwa indawo evikelayo, abavubukuli be-FORLOAD bonke bamukela injini ye-EURO5 ne-EPA4: i-KOOP brand, i-Yanmar brand, i-Kubota brand, i-Perkins brand, i-CUMMINS kanye nenjini yomkhiqizo ye-ISUZU.Iphampu ye-excavator kanye ne-valve nayo ikhetha ukusebenzisa uhlobo oludumile ukwenza isiqiniseko sokuthi ikhwalithi nomshayeli unethezekile.
Ngaphandle kwalokho, i-FORLOAD mini excavator ifaneleka kakhulu indawo yokusebenza yasepulazini nengadi, ngoba uma umbhangqwana osheshayo futhi ungashintsha ukuze usebenzise okunamathiselwe okuhlukile: isando, i-auger, ibhakede eliyisicaba njll. bayanda abalimi nonjiniyela bomphakathi ukukhetha le digger evumelana nezimo njengomsizi wabo.
500mm (noma yimuphi usayizi kungenziwa egcizelele)
I-ChangChai ZN490B 56HP
I-Four-cylinder, Ukupholisa amanzi, umjovo oqondile
Amandla okumba ibhakede
Amandla okumba ingalo
Ibanga eliphansi lenkundla
Ukuqamba izinto ezintsha, okuhle kakhulu kanye nokwethembeka yikona okuwumongo webhizinisi lethu.Lezi zimiso namuhla ezengeziwe kunanini ngaphambili zakha isisekelo sempumelelo yethu njengefemu esebenza emhlabeni wonke emaphakathi yekhwalithi Engcono Kakhulu ye-China Mini Excavator 4tonne 4000kgs, Siqinisekise ukuthi singethula izixazululo zekhwalithi ephezulu ngenani elifanele, usizo oluhle kakhulu lwangemva kokuthengisa amathemba.Futhi sizodala amandla amahle.
Ikhwalithi engcono kakhulu ye-China Mini Excavator, i-Mini Digger, Ngemikhiqizo yezinga lokuqala, isevisi enhle kakhulu, ukulethwa okusheshayo kanye nenani elihle kakhulu, siwine kakhulu amakhasimende angaphandle '.Imikhiqizo yethu ithunyelwe e-Afrika, Middle East, Southeast Asia nezinye izifunda.
Okwedlule: 3000kgs Mini Crawler Excavator
Olandelayo: 3tons Diesel Forklift Truck
TBE10 1000kgs mini excavator nge SALE EURO5 kanye...